Fanadiovana teny Analakely :: Tratran’ny bemidina ireo ankizivavy sy vehivavy bevohoka mivaro-tena • AoRaha
Vehivavy roapolo mpivaro-tena teny Analakely sy ny manodidina no noraofin’ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’ny Boriborintany voalohany, tamin’ny herinandro. Hetsika manokana nataon’ny polisy taorian’ny fitarainana maro voarainy no nahazoana azy ireo.” Mbola tena zaza ny fijery ny iray amin’izy ireo. Izy rahateo mbola tsy manana kara-panondro. Efa be kibo, vinavinaina ho teraka amin’ny volana avrily kosa ny iray hafa”, hoy ny fitantaran’ny kaomisera Randriamparany Ted Steven, lehiben’ny kaomisarian’ny boriborintany voalohany eny Analakely, omaly.
Nambarany fa ankoatra ireo mitoe-jaza sy tsy ampy taona, dia misy amin’ireo vehivavy manao an’io asa io no mahasahy mitanjaka imason’olona ary eny amoron-dalana. “Nohidiana tany amin’ny fonja kelin’ny polisy avy hatrany itsy farany. Nampahafantarina azy fa tsy kolontsaintsika Malagasy ny mitanjaka imason’olona”, hoy indray ny lehiben’ny kaomisarian’ny boriborintany voalohany. Nampiany fa avy amin’ireo faritra iva ny ankamaroan’ireo olona roapolo ireo. Hita ho avy amin’ny fianakaviana sahirana ihany koa ry zareo.
Natao hampahafantarana an’ireo mpanao an’io asa io amin’ny fisian’ny fanaraha-maso ny antony nanangonana an’ireo vehivavy ireo. “Nanaovana fanentanana izy ireo mba hanohy ny fianarany ho an’izay mbola tokony hianatra. Norosoana hevitra amin’ny fambolena any ambanivohitra kosa ny hafa”, araka ny fanampim-panazavan’iry loharanom-baovao iry.
Marihina fa nanaovan’ny mpitandro ny filaminana avy ao amin’ny kaomisarian’ny boriborintany voalohany fidinana ifotony ihany koa ireo mpivarotra zava-pisotro mahamamo eo Analakely sy manamorona ny “ Arcade”. “Nohamafisina tamin’ireo mpivarotra fa tsy azo ivarotana zava-mahadomelina eny an-toerana, ka tsy tokony hisy latabatra fivarotana hijoro intsony”, hoy indray ny kaomisera Randriamparany Ted Steven.
Fanatsarana fitsaboana :: Vaky bantsilana ny kolikoly eny amin’ny tobim-pahasalamana